3 Wepụ-ụzọ site na Mkpịsị ugodi 5 ka ọpụrụ iche Email Marketing | Martech Zone
Dị ka Nyocha MarketingSherpa Benchmark 2012, ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịbawanye mmefu ego email ha karịa 30% na 2012. Agbanyeghị, Delivra na-achọpụta na ọtụtụ ụlọ ọrụ ka na-agbaso otu ụzọ dị mkpa nke email - ndepụta ndepụta, ọdịnaya, mwekota, imewe, wdg.
Emela mmefu ego email gị n’etinyeghi anya n’ihe kwesịrị ime ka ọ dị mma na nke na-adịghị. Wepụta oge lekwasị anya n'ihe ndị bụ isi; ọ bụ echiche ndị a bụ isi na-eme ka mmemme ịre ahịa email gị pụọ iche. Na nso nso a, Delivra bipụtara usoro, ọnụọgụ na aro. N'okpuru ebe a bụ 3-aways:
Mepụta ọdịnaya dabere na data. Mepụta ọdịnaya dị mkpa nwere ike ịbụ ihe ịma aka nye ndị na-ere ahịa email. Na-anakọta data gbasara ndị na-ege gị ntị oge niile iji mee ka ọdịnaya dị mkpa dị ka ọ nwere ike. Chọpụta ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ ịnụ site na ịjụ na nyocha ma ọ bụ ebe mmasị.
Nkeji Na-enye Gị Oke na Asọmpi ahụ. na MarketingSherpa 2012 Email Marketing benchmark Survey, o kwuru na 95% nke ụlọ ọrụ chọrọ iji melite ndepụta ndepụta. Ahapụla gị - bido ilekwasị anya na mezue nkebi gị ugbu a!
Emebe maka mkpanaka, oge. Dabere na otu akụkọ ahụ, 58% nke ndị na-ere ahịa email anaghị emepụta ozi ịntanetị iji nye ya nke ọma na smartphones. Smartphones na-ewu ewu karị, yabụ gịnị kpatara na ị gaghị eji nke a n'uche imepụta ozi ịntanetị?
Tags: content MarketingdataNdiaguemail MarketingAzụmaahịaMobile na Mbadamba ụrọnkewaọnọdụ